Helitaanka Fursadaha Qalabaynta Suuqgeynta | Martech Zone
Isniin, Maarso 21, 2011 Arbacada, Oktoobar 16, 2013 Douglas Karr
Waxaan si adag ugu shaqeyneynaa sidii aan otomaatig ugu shaqeyn lahayn macaamiishayada. Markaad bilawdo inaad ka fikirto dadaalkaaga suuq, xagee runti ku bixisaa waqtiga ugu badan? Shirkaduhu inta badan way dhimaan ama si weyn u dhayalsadaan waqtiga ay dhab ahaan u qaadanayso inay ku kala wareegto howlaha. Anaga hada la dhajiyay ku saabsan waqtiga ay qaadaneyso in la duubo tilmaamaha iyo taabashada dhibcaha CRM - iyo badeecad fududeyneysa howsha.
Fursadaha ayaa ah inaad tan sameyneyso maalintii oo dhan dadaalkaaga suuq-geynta, laakiin xitaa ma ogaan kartid. Xitaa wax u fudud sida dirista Tweet-ga ee kuwa raacsan waxay u muuqan karaan kuwo aan macquul ahayn… laakiin haddii aad rabto inaad ku darto xiriir iyo raadraac Tweet dib ugu noqo barnaamijkaaga Analytics, waxay kuu baahan kartaa inaad dalbato sumado ama aqoonsi ololeyaal, soo gaabiyo illaa dhinac saddexaad URL gaabin, tijaabi xiriiriyaha gaagaaban… ka dibna dhaji tweet-ka.
Tani waxay kaliya u rogtay tweet xoogaa dadaal ah. Haddii aad ku celceliso ficilkan waqti ka dib, waxaad cuni doontaa waqti qiimo leh. Waqti sii qaado oo tanna tijaabi. Waqtiga soo socda ee aad qoraysid waxa ku jira, wax ka beddelayso xogta, ama aad falanqaynayso natiijooyinka… calaamadee xilliyada aad tallaabooyinka qaadayso. Waxaad ogaan doontaa in qabashada shaqada dhabta ahi ay aad uga yartahay kala guurka u dhexeeya.
Kala-guurkaas waa dahab waxayna siinayaan fursad ay ku maalgashadaan codsiyada otomaatiga suuqgeynta. Si fudud haddii loo dhigo, otomatiga suuq-geynta wuxuu kuu oggolaanayaa inaad wax badan ku qabato ilaha yar. Marar badanna, otomatigga suuqgeynta ayaa yareyn kara halista khaladka aadanaha! Sida weyn Ron Popeil wuxuu yidhi, "Deji oo illooba!"
Sidaan jecelahay inaan idhaahdo, “Waxaa laga yaabaa in barnaamij loo hayo arrintaas!”
Tags: duubista jqueryvideo livewpengine